KWI-INTANETHI LAWYER CONSULTANT FOR FREE
I-INTANETHI LAWYER CONSULTANT KUBA FREE NGAPHANDLE UBHALISO
Umthetho okhoyo sijongana yonke imiba oluntu ubomi, ichaza imigangatho ukuziphatha kwaye uxanduva lwabo utyeshelo lomgaqo. Inani ezikhoyo nemithetho nemiqathango kubaluleke kangaka ukuba nkqu experienced kusenokuba nzima ukuba lawula kubo. Nokuqheleka abemi kulo eyona kunjalo nje ayisayi ukwazi ukwenza ngendlela onikiweyo imeko. Kwi-eyona imbi meko kungathatha ezingachanekanga, izigqibo ziya kuphela worsen le meko kwaye complicate isisombululo a kunzima imeko.
Eziqhelekileyo indlela yokufumana uncedo ukusuka kwi-ingcaphephe iimeko ezinjalo ingaba isemthethweni ingcebiso. A lawyer, njenge nabani na ongomnye, ikuqonda umthetho wepalamente, ayo peculiarities kwaye ngoku okwenzeke. Ukongeza, lawyer kukuba nako zichaza ukuba nokuqheleka umntu intsingiselo yalo okanye ukuba inqaku umthetho, ayo isicelo kwaye zoko. Uphuhliso bolwazi sele inikwa banyukele a ngezixhobo ezahlukeneyo isemthethweni uncedo, kuquka free online isemthethweni ingcebiso phezu ifowuni. Kwiwebhusayithi nabani unako ukuzuza ngenkxaso isemthethweni ingcebiso.Ukwenza oku, ngokulula umnxeba elikhankanyiweyo inombolo yefowuni. I-okuninzi le indlela counseling ngu obvious: Ukufumaneka. Nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku, naluphi na usuku evekini ingcaphephe ingaba ilungile ukuphendula yonke imibuzo. Kuba ingcebiso musa kufuneka utyelele ii-ofisi ze-mthetho firms, inkunkuma ixesha lokulinda. _ephathwayo. Uninzi rhoqo, umntu kufuneka nika iingcebiso kwi isemthethweni imiba. Kule imeko enjalo, esiqhelekileyo iingcebiso engenakwenzeka, ngoba izakuba entail ilahleko ixesha.
I-intanethi luhlomle kuwo efowunini akanalo oku drawback, ukusukela ukuba ikhona na kuphela nanini, kodwa naphi na. Ke ngokwaneleyo ukuze ufumane kwi-Intanethi kunye nasiphi na isixhobo ukuba ixhasa lo msebenzi. Phezulu iintlanganiso zokubonisana. Iinkcukacha zethu abaqondisi-mthetho yenza kubo ukuphendula ngoko nangoko ukuba uninzi imibuzo. Kwilixa apho uya kufumanisa kunye kwiimeko obukhulu ugqityo, u-meyi kufuneka ezongezelelweyo ixesha familiarize kwabo kunye nuances kwetyala kwaye afanelekileyo amanqaku wepalamente. Nokungabikho ubhaliso kwiwebhusayithi.Ukuba ngesizathu esithile umntu akuthethi ukuba ufuna ukuba angenise ngokwam real igama, unako ukhethe zithungelana kuye nawuphi na igama okanye nickname. Imiceli-igama nefani zibe eziyimfuneko kwi-komhlaba ezisemthethweni zemali, amabango, njalo njalo.
Free online isemthethweni iingcebiso nge-ifowuni kwiwebhusayithi kuzihlawula zonke iindawo, umthetho. Ukongeza ngqo iimpendulo imibuzo abaqondisi-mthetho uza lokucebisa eyiyo yobomi intshukumo kwi-onikiweyo imeko. Ingcaphephe uza kuphendula imibuzo kwindlu ezinjalo kwiindawo umthetho njenge: Usapho umthetho. Lixoxa nayiphi na imibuzo ye-elokugqibela kwaye ukuchithwa kwezindlu umtshato, ukwahlulwa ipropati, drafting umtshato izivumelwano, pleadings, njalo njalo. Irhafu umthetho.I-lawyer uza phendula nayiphi na imibuzo enxulumene taxation, intlawulo iirhafu kwaye imirhumo kunye irhafu izibonelelo. Ukuba kuyimfuneko, iya kunceda ukwenza kuyimfuneko amaxwebhu (umz irhafu Isibhengezo). Nemibutho yabasebenzi umthetho. I-u-uza phendula nayiphi na imibuzo enxulumene yokutolika kwaye kwemichiza amanqaku ka-nemibutho yabasebenzi Ikhowudi nezinye normative kwaye isemthethweni izenzo (kwakhona idala ubunzima kwingqesho, dismissal, vacation, njl